बच्चा इलेक्ट्रिक स्कूटर - समाचार - शेन्ज़ेन Xiangyou टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड
बच्चा इलेक्ट्रिक स्कूटरsomatosensory बाइक को एक प्रकारको छ कि व्यक्ति को सन्तुलन क्षमता अभ्यास। सानोदेखि ठूलोसम्म हामी पत्ता लगाउन सक्छौं कि त्यहाँ कोही व्यक्ति अपर्याप्त सन्तुलनको कारण हाम्रो वरिपरि बैसाखीहरू लिएर हिंडिरहेका छन्। आजकल, त्यहाँ धेरै प्रकारका छन्बच्चा इलेक्ट्रिक स्कूटरs बजारमा, र वयस्कहरू र बच्चाहरूको धेरै समूह तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न मनपराउँदछन्, विशेष गरी बच्चाहरू जसले उपन्यास चीजहरू मन पराउँछन्। यद्यपि यो एक छनौट गर्न केहि विचार लाग्छबच्चा इलेक्ट्रिक स्कूटरबच्चाको उमेर र वास्तविक स्थितिमा आधारित।
त्यसोभए कुन एलिमेन्टहरू विचार गर्नुपर्छबच्चा इलेक्ट्रिक स्कूटरबच्चाहरूको लागि? यसलाई एकै साथ हेरौं:
१. त्यहाँ टायरको धेरै फरक आकारहरू छन्, जस्तै .5..5 इन्च, inches इन्च, र १० इन्च। बच्चाहरूको लागि सल्लाह अलि सानो आकार छनौट गर्न हो। ठूला पाels्गाहरू तुलनात्मक रूपमा छिटो हुन्छन्। सानो पाels्ग्रा ढिलो छ तर उचाईमा कम छ। यो बच्चाहरूको लागि राम्रो हो।
२. ठोस टायर छान्ने प्रयास गर्नुहोस् र गैर मुद्रास्फीति प्रयोग गर्नुहोस्। बच्चाहरूको लागि, यद्यपि एक खेलौना मनपराउनु पर्दछ, यो तुलनात्मक रूपमा श्रम बचत हो, र यसले टायर ब्लाउआउट्सको घटनालाई रोक्न र टायर फुलाउने आवश्यकतालाई हटाउन सक्छ।
वजन सकेसम्म हल्का हुनुपर्दछ। यदि यो धेरै गह्रौं छ भने, बच्चालाई कार लिन गाह्रो समय हुनेछ, आखिर, बच्चासँग सीमित उर्जा छ। र यदि बच्चाले बाइकलाई सार्दा संघर्ष गरिरहेको छ भने, उसले सवारी गर्दा र खेल्दा रूचि हराउनेछ।
तीन, सवारी ठाउँ
कार खरीद गर्दा, तपाईंले आफ्नो बच्चाको आकार पनि विचार गर्नुपर्छ। ब्यालेन्स बाइक धेरै चौडा हुनुहुँदैन, किनकि धेरै चौडाइले बच्चाको स्प्यान ठूलो बनाउँदछ र सवारी गर्न यो धेरै सुविधाजनक हुँदैन। धेरै नै साँघुरो, यद्यपि अगाडि र पछाडि प्रभावित हुँदैन, तर स्टीयरिंग अपरेशन कम लचिलो हुनेछ। सन्तुलन बाइक चलाएर, तपाई आफ्नो खुट्टा राम्रोसँग स्लाइड गर्न सक्नुहुन्छ, र पूरै शरीरको मांसपेशीहरूको व्यायामको निश्चित प्रभाव पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसो भए, एक निश्चित समझको साथ, म विश्वास गर्दछु कि आमाबुवाहरूको हृदयमा केहि मानकहरू हुन्छन् जब एक छनौट गर्दाबच्चा इलेक्ट्रिक स्कूटरतिनीहरूका बच्चाहरूको लागि।
समायोज्य वयस्क इलेक्ट्रिक स्कूटर कसरी मोड्ने र फिर्ता लिने?